အခုအချိန်မှာ အိုးအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာပြီး စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့မိသားစုတွေ၊ အားလုံးအတွက်လည်း ဆို့နင့်ကြေကွဲဝမ်းနည်းရပါတယ်ဆိုတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု….. – Cele Snap
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…..သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေပါ ပါဝင်နေရင်း အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် တိမ်းရှောင်နေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှတစ်ဆင့် နေ့စဉ်ရက်ဆက်မပြတ်မကွက် သတင်းအချက်အလက်တွေ နဲ့ ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ကျောင်းသားတွေ ပြန်လွှတ်ပေးဖို့Speak out လုပ်ပေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လက်ရှိအခြေအနေမှာ ဝင်ငွေမရှိ ပေမယ့်လည်း စုဆောင်းထားတဲ့ ငွေကြေးတစ်ချို့အား CRPH အတွက်ဒေါ်လာ (၅၀၀) ကို လှူဒါန်းထားတာကိုလည်း ပရိသတ်တွေ ထပ်တူဝမ်းမြောက်စေရန် ဝေမျှပေးထားသေးတာပါ။ မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းလောက်ကလည်း ပိုင်ဖြိုးသုရဲ့ Facebook အကောင့်တွင် ဆိုးရွားလှတဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခဒဏ်ကိုခံလာရတဲ့ တိုင်းရင်းသားမောင်နှမတွေအတွက် ဆို့နင့်ကြေကွဲဝမ်းနည်းနေရကြောင်း ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေအတွက် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ လိုအပ်တာမှန်သမျှ ဝိုင်းဝန်းကူညီ စောင့်ရှောက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းကိုလည်း…
” ဆိုးရွားလှတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခဒဏ်ကို နှစ်ပေါင်း များစွာ ခံလာရတဲ့ ကချင် ၊ ကရင် အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံးအတွက် များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ် …. အခုအချိန်မှာ အိုးအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာပြီး စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့မိသားစုတွေ၊ လူမမယ်ကလေးတွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ စစ်ဘေးရှောင်ရင်း အသက်စွန့်သွားရတဲ့ပြည်သူတွေ၊ ပြိုကွဲသွားရတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးအတွက်လည်း ဆို့နင့်ကြေကွဲဝမ်းနည်းရပါတယ်….. မိသားစုတွေ ဘဝတွေနဲ့ရင်းပြီး စစ်ဘေးဒုက္ခခံစားနေရတဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေအတွက် ကျွန်မတို့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ဝိုင်းဝန်းကူညီစောင့်ရှောက်သွားပါမယ်လို့ ကတိပြုပါတယ် 🙏🙏🙏 ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာကို ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိစေရန်အတွက် တစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
ပရိတျသတျကွီးရေ…..သရုပျဆောငျ ပိုငျဖွိုးသုကတော့ လူထုလှုပျရှားမှုတှပေါ ပါဝငျနရေငျး အခွအေနအေရပျရပျကွောငျ့ တိမျးရှောငျနရေတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ သို့ပမေယျ့လညျး သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှတဈဆငျ့ နစေ့ဉျရကျဆကျမပွတျမကှကျ သတငျးအခကျြအလကျတှေ နဲ့ ဖမျးဆီးထိမျးသိမျးခံထားရတဲ့ ကြောငျးသားတှေ ပွနျလှတျပေးဖို့Speak out လုပျပေးနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ လကျရှိအခွအေနမှော ဝငျငှမေရှိ ပမေယျ့လညျး စုဆောငျးထားတဲ့ ငှကွေေးတဈခြို့အား CRPH အတှကျဒျေါလာ (၅၀၀) ကို လှူဒါနျးထားတာကိုလညျး ပရိသတျတှေ ထပျတူဝမျးမွောကျစရေနျ ဝမြှေပေးထားသေးတာပါ။ မကွာသေးခငျ ရကျပိုငျးလောကျကလညျး ပိုငျဖွိုးသုရဲ့ Facebook အကောငျ့တှငျ ဆိုးရှားလှတဲ့ စဈဘေးဒုက်ခဒဏျကိုခံလာရတဲ့ တိုငျးရငျးသားမောငျနှမတှအေတှကျ ဆို့နငျ့ကွကှေဲဝမျးနညျးနရေကွောငျး ရေးသားထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့တှအေတှကျ တတျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ လိုအပျတာမှနျသမြှ ဝိုငျးဝနျးကူညီ စောငျ့ရှောကျပေးသှားမယျ့အကွောငျးကိုလညျး…
” ဆိုးရှားလှတဲ့စဈဘေးဒုက်ခဒဏျကို နှဈပေါငျး မြားစှာ ခံလာရတဲ့ ကခငျြ ၊ ကရငျ အပါအဝငျ တိုငျးရငျးသားညီအဈကိုမောငျနှမမြားအားလုံးအတှကျ မြားစှာစိတျမကောငျးဖွဈရပါတယျ …. အခုအခြိနျမှာ အိုးအိမျတှကေိုစှနျ့ခှာပွီး စဈဘေးတိမျးရှောငျနရေတဲ့မိသားစုတှေ၊ လူမမယျကလေးတှေ၊ သကျကွီးရှယျအိုတှနေဲ့ စဈဘေးရှောငျရငျး အသကျစှနျ့သှားရတဲ့ပွညျသူတှေ၊ ပွိုကှဲသှားရတဲ့မိသားစုတှအေားလုံးအတှကျလညျး ဆို့နငျ့ကွကှေဲဝမျးနညျးရပါတယျ….. မိသားစုတှေ ဘဝတှနေဲ့ရငျးပွီး စဈဘေးဒုက်ခခံစားနရေတဲ့ ကြှနျမတို့ရဲ့တိုငျးရငျးသားညီအဈကိုမောငျနှမတှအေတှကျ ကြှနျမတို့ တတျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ ဝိုငျးဝနျးကူညီစောငျ့ရှောကျသှားပါမယျလို့ ကတိပွုပါတယျ 🙏🙏🙏 ” ဆိုပွီး ရေးသားထားတာကို ပရိသတျတှလေညျး သိရှိစရေနျအတှကျ တဈဆငျ့ပွနျလညျ ကူးယူတငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျနျော။